Dadweyne diidan safarka Cali Guudlaawe oo xiray wadooyinka Beledweyne – AfmoNews
Dadweyne diidan safarka Cali Guudlaawe oo xiray wadooyinka Beledweyne
Dadka ku dhaqan Magaalada Beledweyne ayaa maanta magaaladaasi ka wada bannaanbax looga soo horjeedo safarka Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), ee uu qorsheynayo in maanta uu ku taggo magaaladaasi.
Dadka reer Beledweyne ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaaladaasi, iyagoona ku gooyay dhegxaan, sidoo kalana ku gubay taayaro.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in bannaanbaxa maanta ka socdo magaaladaasi uu ka xoogan, midkii maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada.
Ciidamada Dowladda ee ku sugan magaalada ayaan wax is hortaag ah ku samayn dadka deegaanka, ee ka biyo diidan imaanshaha Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle.
Dadka reer Hiiraan ayaa ka biyo diidan doorashadii 11-kii bishii November ka dhacday Magaalada Jowhar, laguna soo doortay Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle.
Dhanka kale laba qof ayaa ku dhaawacantay iska horimaad aroornimadii hore ee saakay ka dhacay magaaladaasi, kaasoo u dhaxeeyay Ciidamada Booliska iyo dhalinyaro deegaanka ah, oo sida la sheegay isa soo abaabulay. Dadka dhaawacmay ayaa la dhigay isbitaalka weyn ee Beledweyne.
Si kastaba ha-ahaatee xaaladda Magaalada Beledweyne ayaa maanta ah mid kacsan, waxayna tani ku soo aadaysaa, iyadoo ay maanta tahay maalin nasiino oo Jimco ah.